Gerard Pique Oo Barcelona Ku Riixaya In Ay Lasoo Saxiixato Bar-tilmaameedka Kooxda Real Madrid – Gool FM
(Barcelon) 02 May 2018. Wargeyska “Don Balon” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in difaaca kooxda Barcelona Gerard Piqué uu ku riixayo maamulka Blugarana inay lasoo saxiixdaan xidiga kooxda Real Betis Fabian Ruiz oo bar-tilmaameed xoogan u ah Real Madrid suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
22 jirkan kooxda Real Betis ayaa wuxuu xili ciyaareedkan ka sameenayaa qaab ciyaareed cajiib ah horyaalka La Liga ee dalka Spain, waana sababta uu u doonayo Piqué in ay Barcelona ay sameyso saxiixiisa.
Gerrard Pique ayaa u soo jeediyay kooxda reer Catalonia ee Barcelona magaca xidiga kooxda Real Betis Fabian Ruiz, wuxuuna ku wargaliyay in sida ugu dhaqsida badan ay ku sameeyaan saxiixiisa, si aysan Real Madrid ugu guuleysan adeegiisa.
Gerard Pique ayaa ka warqaba rabitaanka Real Madrid ee ku aadan Fabian Ruiz, sidaasi darteed wuxuu doonayaa in kooxdiisa Barcelona ay ka dul qaado saxiixa ciyaaryahankan.
Barcelona ayaa la shaacinayaa in ay saxiixa xidigan u diyaarsaneyso aduun lacageed gaarsiisan 30 milyan oo euros, waana qiimaha lagu kansali karo heshiiska uu ku joogo Real Betis.
Ramos Oo Isku Dayaya In Uu Perez Ka Dhaadhiciyo Joojinta fikradda Uu Ku Doonayo Soo Xero Galinta Xidigan